SanduuqqniTarree ykn Tarjaawabii hammanga man'ee tokkoffaa filatamee qabaachuu qaba.
Yoo wardii Qooyyaboota Hedduu Ekseelii Maykiroosooftiitti aleergite, bakki man'ee formulaa of kessaa qabu gutumaan gutuutti sadhaatawaa hamanga deetaatti hiikuu qabda.
Man'eewwan foormulaa qoyyaba baay'ee of keessaa qabaniif wabii man'ee galchi.
Gabatee deetaa keessa naqaa wabii man'ee akka jijjiramaa tarreewwanitti fayyadamuu barbaadde galchi.
Gabatee deetaa keessa naqaa wabii man'ee akka jijjiramaa tarjaawwaniitti fayyadamuu barbaadde galchi.
Title is: Qooyyaboota Hedduu